bryanekobe, TELES RELAY မှစာရေးသူ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ 25, 2020 0
Les manifestations qui ont changé le Nigéria à jamais Les manifestations contre la brutalité anti-policière au Nigeria ont créé un mouvement puissant quiasemblé secouer ceux qui étaient au pouvoir, mais après une quinzaine…
Le Soudan accepte les relations avec Israël, dit Trump Le Soudan doit normaliser ses relations avec Israël - la dernière d'une série de pays de la Ligue arabe à le faire. Dans le même temps, le président…
Ce commentaire de Trump sur l’explosion d’un barrage met l’Ethiopie en…
Ce commentaire de Trump sur l'explosion d'un barrage met l'Ethiopie en colère Le Premier ministre éthiopienadéclaré que son pays "ne cèderait pas à des agressions d'aucune sorte" après que le président Donald Trump a…
ကင်မရွန်းရှိကျောင်းမုန်တိုင်းအပြီးတွင်သေဆုံးခဲ့ရသောကလေးများသေနတ်သမားများသည်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတခုကိုပျက်ကျသည့်ကင်မရွန်းရှိ၊ အနည်းဆုံးကလေးခြောက် ဦး သေဆုံးပြီးတစ်ဒါဇင်ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည် Bui ရှိခွဲထွက်ရေးသမားများအားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ 24, 2020 0
Bui မှခွဲထွက်ရေးသမားများအားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများကဆန္ဒပြပွဲများ Bui ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအသင်းဝင်များသည်သူတို့လပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရသောရက်စက်ယုတ်မာသည့်လုပ်ရပ်များအပေါ်သူတို့၏ဒေါသကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
Brenda Biya သည် BAS ကိုထပ်မံနှိုးဆွရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ Pop ကြယ်ပွင့်အ ၀ တ်အထည်တွင်သူမကိုတွေ့ရသည့်နေရာတွင် Brenda Biya သည်သူမ၏ BAS အားသူမ၏လိုက်လံဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထပ်မံလှုံ့ဆော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်သား ၁၅ ဦး ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ကင်မရွန်းတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်ရှိအင်စတီကျူးရှင်းမှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒါလတ်လာဒင် ဦး ဆောင်သောနိုင်ဂျီးရီးယားလေတပ်စစ်ကောလိပ်မှ ၁၅ ဦး ပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ...
Cabral Libii အနမ်း၏ဤဓာတ်ပုံသည်ကွန်ယက်များ၌ဆူညံသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Cette photo de Cabral Libii en train d'embrasser fait le buzz sur les réseaux sociaux Ce n'est pas tous les jours qu'on voit le président du PCRN dans une telle situation. La photo quiaété publiée sur Facebook ce jeudi 22…
Kamto ပြန်ပေးဆွဲမှုအတွက် Ferdinand Ngoh Ngoh နှင့် Laurent Esso (Direct) အကြားတိုက်ပွဲ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ 23, 2020 0
Kamto အားပြန်ပေးဆွဲမှုအတွက် Ferdinand Ngoh Ngoh နှင့် Laurent Esso (Direct) အကြားတိုက်ပွဲဖြစ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ El Che Nou ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်များအရတရားရေး ၀ န်ကြီး Laurent အကြားဘာမှမဖြစ်ဟု ...
ရဲကို Romeo Dika ကိုဆင့်ခေါ်သည်
La police convoque Roméo Dika Selon un document publié par l'activiste Boris Bertolt, l'artisteaété convoqué par la police judiciaire. L'activiste craint que la star ne soit la cible du régime de Yaoundé qui veut le faire…
123 ... 157 လာမယ့်